I-denim yabesifazane igxila ama-shorts
Into ethandwa kakhulu ezweni lamanje lanamuhla yizimfishane ezinhle zabesifazane. Bawunqobe izinhliziyo zabalandeli babo ngenxa yenduduzo yabo kanye nokuziphendulela kwabo. With shorts shorts, ungakha izinombolo eziningi zemicibisholo ehlukahlukene ngemisebenzi ehlukahlukene, kungakhathaliseki ukuthi uhlangana nabangani, uhamba, upikiniki noma uphumule ebhishi. Ngoba namuhla ama-shoim shorts atholakala ezinhlobonhlobo ezinkulu. Bangaba:
ngezici zokuhlobisa kanye nemiklamo.
Indawo ekhethekile ithathwe yizo zithombe ezinamaphethelo angaphenduliwe. Futhi ekuphakameni kokuthandwa yizicathulo ezincane ezibizwa ngegama elincane.
Yini okufanele ugqoke ama-shorts ama-denim ahlanganisiwe?
Lolu hlobo lokugqoka luye lwasungulwa isikhathi eside e-wardrobe ehlobo yabesifazane abaningi. Amamodeli anwetshiwe we-denim shorts azobukeka enhle emantombazaneni okukhula okuphezulu. Lesi sitayela siyadingeka cishe nganoma iyiphi indlela. Uma udwebe anyanisi, kufanele kuqala uqaphele ukulinganisa kwesibalo sakho. Qinisekisa umphumela wokulungiswa nokunciphisa okunokwenzeka ngosizo lwezintambo ezikhanyayo zesigqoko esithambile, ama-blouses ama-chiffon, kanye nama-T-shirts amathathu.
Ungakhohlwa mayelana nokukhetha okulungile kwezicathulo. Cishe noma yiziphi izinkinobho zasehlobo zizosiza ngokugcwele, kodwa zingabangeli izicathulo. Izicathulo ezifudumele ezenziwe nge-pastel shades zizohambelana kahle. Ukunciphisa ama-denim ama-denim ama-band e-band ehlanganiswa nazo zonke izinto ze-wardrobe zasehlobo. Ngakho-ke, ungakwazi ukugqoka ngokuphepha ephepheni lesikhwama, isikhwama, ijezi elikhanyayo elikhululekile, amahlumela , futhi uzovela ngendlela enhle kakhulu. Ungesabi ukuzama futhi ukhethe okuthile okuzokhululeka kuwe.
Isikwele esivela ku-guipure
Indwangu yesikhombisa esinezinyanga ezingu-20
Sneakers fashion stylish
Gqoka ngesitimela - amamodeli amahle kunazo zonke kanye nama-chic
I-Swimsuit-thong - ubani ofanelekayo?
Amabhantshi esikhumba wabesifazane
Ikhadi lokufisa le-Feng Shui ngo-2018 - ukuthi ungayenza kanjani, nini ukuthi usebenze nokuthi ungabeka kuphi?
Indlela yokudweba i-Luntika?
Butter kuhle futhi kubi
Ukuhlolwa kwe-1 trimester - ukuchazwa kwemiphumela
Ungayinakekela kanjani i-dracaena?
Ijacket yasebusika yabesifazane enehhafu
Yidla nge-gastritis ye-atrophic
Pizza inhlama nobisi
Iphara eliphakathi kwe-Pea in multivarque - izindlela zokupheka ezinhle kakhulu zenyama yonke, inyama, izimbambo
Amapaneli we-thermal for the facade
Indlela yokutshala amakhowe ku-dacha - izindlela ezinhle kakhulu ezifakazelwe
UMaggie Smith wanikela ngokuthatha isitatimende se-Emmy ku-Lost and Found